प्रधानमन्त्री ओलीमा अहँकार बढेको छ, यो अशोभनीय कुरा हो – अर्जुनरसिंह के.सी, नेता नेपाली काँग्रेस(अन्तरवार्ता) | suryakhabar.com
Home कुराकानी प्रधानमन्त्री ओलीमा अहँकार बढेको छ, यो अशोभनीय कुरा हो – अर्जुनरसिंह के.सी, नेता नेपाली काँग्रेस(अन्तरवार्ता)
अर्जुननरसिंह के.सी. नेपाली काँग्रेसका प्रभावशालि नेता हुन् । पार्टीको प्रवक्ता तथा सह—महामन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका के.सी. नेपाली काँग्रेस भित्र बौद्धिक, प्रखर र स्पष्ट बोल्ने नेताको रुपमा परिचित छन् । नेपाली काँग्रेसले संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको छ । निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय ब्यहोरे पनि काँग्रेसले संगठन विस्तारमा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिदैन । पछिल्लो समयमा पार्टी चरम गुटबन्दीमा फसेको छ । प्रतिपक्षी दलको रुपमा भएपनि संघीय संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको आरोप सर्बत्र लाग्ने गरेको छ । सरकारले भर्खरै मात्र आफनो नीति र कार्यक्रम शार्वजनिक गरेको छ । एकातिर काँग्रेस हार, अर्कोतिर बाम एकता तयसपछि काँग्रेसभित्र मौलाउदै गएको गुटबन्दीलाई मध्यनजर गर्दैनेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका एबम् पूर्ब मन्त्री केसी संग सुर्यखवर डट कम् प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीः–
संघीय संसदको निवाचनमा नराम्रोसँग नेपाली काँग्रेस पार्टी पराजित भयो यो पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिन कुनै पनि पदाधिकारी तथा नेताले आनकानी गर्नुको पछाडीको कारण के हो ?
ऋाफ्नो तर्फबाट मैले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिइसकेको छु । मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति, महामन्त्री, बरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीहरुले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ भनेको थिए । नैतिक जिम्मेवारी लिन साथीहरुले आनकानी गरेपछि तह अनुसारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने आग्रह गरेको थिँए । तर यतातिर पनि ध्यान दिइएन । पराजयका जुनसुकै कारक तत्व भएपनि नैतिक जिम्मेवारी नलिने नेतृत्वलाई आगामी महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले मुल्याँकन गर्ने छन् । निर्वाचनमा टिकट नै नदिएका र त्यो समयमा पार्टीमा भुमिका नै नदिएका धनराज गुरुङ्ग, कमला पन्त,कल्याण गुरुङ्ग, गुरुराज घिमिरे लगायतलाई समेत नैतिकताका आधारमा पराजयको सामुहीक जिम्मेवारी लीन बाध्य बनाउन खोजीयो तर संघीय निर्वाचनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेले पराजयको नैतिकताको आधारमा तह अनुसारको जीम्मेवारी समेत लिन मानेनन् । तर भुमिका नै नभएकाले के जिम्मेवारी लिने ?
नेपाली काँग्रेसमा गुट, उपगुटका धेरै समुहहरु पहिल्येदेखि सकृय छन् र एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाउने कार्य जारी छ यो कहिले रोकिन्छ ?
यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ । बामगठबन्धन लोकतन्त्र र काँग्रेसका लागि ठुलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । त्यसकारण पार्टीले नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ संरचनागत अवधारणा र आउने भावी कार्य नीति र रणनीतिमा आमुल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । काँग्रेस भित्र ब्यतिm ब्यतिmका अवधारणाहरु छन् । वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रकृया नै लोकतन्त्र हो । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले फरक विचार राख्नु स्वभाविक हो । यो मिलिट्रि स्टाइलको कमाण्डमा हिड्ने पार्टी होइन तर पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा, वैज्ञानिक, संस्थागत र पारदर्षी ढंगबाट अघि बढाउनु पर्ने कमि छ । र त्यसलाई हामी पुर्णता दिने पक्षमा लागिरहका छौँ ।
पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले एकतर्फी रुपमा पदाधिकारी मनोनयन गरेको भन्दै बरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष आक्राेिसत छ यहाँको के छ धारणा ?
काँग्रेसको विधानमा जुनसुकै महत्वपुर्ण विषयमा प्रस्ताव गर्दा वा पदाधिकारी मनोनयन गर्दा सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र निर्वाचित केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने ब्यवस्था छ । अहिलेको चुनौतीपुर्ण अवस्थामा सभापति जीले सबैलाई समेटेर जानु पथ्र्यो र सहमती पुर्ण गरेको भए अत्यन्तै राम्रो हुनेथियो । अहिले फरक दृष्टिकोण , विभाजन, विमतीहरु बाहिर निकाल्ने बेला होइन । बिगतमा परम्परागत रुपमा पनि पुर्वसभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालादेखि शुशिल कोइरालासम्मले लामो समय पर्खेर भएपनि सहमती पुर्ण रुपमा पालन गर्ने गरेका थिए । तर बर्तमान सभापतिले यसलाई पनि तोडे । त्यसकारण सभापतिको मानसिकता एक्लै जान्छु, एकलै सक्छु भन्ने खालको अंहकारवादी देखिएको छ । अहिल्ये कसैले पनि चुनौतीको एक्लै सामना गर्छु भन्नु त्यो मुर्खता हो र सवै विचको सामुहिकता र एकता नै आजको आवश्यकता हो ।
चुनौतीका विचमा गुज्रीरहेको काँग्रेसमा संस्थागत निणर्य हुन नसक्नुमा दाषी को छ ? तपाई जस्तो प्रभावशाली नेता पनि काँग्रेसमा हुनुहुन्छ पार्टीलाई मिलाएर लान किन नसकिएको हो ?
मिलाएर लाने कोशिस गर्दा मिल्ने मनोवृती पनि हुनुपर्छ नि, यहाँ कुरा चाँही पद्धती र लोकतन्त्रको गर्ने एउटा गिरोहबाट जे भनो त्यसैलाई अन्तिम निर्णय र सत्य ठान्ने प्रवृती नै पार्टी सुधारको बाधक छ । यसका विरुद्ध संस्थागत रुपमा जानु पर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्र माथि नै चुनौती थपिएको बेला यसको रक्षाका लागि पनि एकता नै आजको आवश्यकता भएको छ ।
संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको लज्जा जनक पराजयपछि नैतिकताका आधारमा पार्टी नेतृत्व परिर्वतन गरिनु पर्नेमा पनि युवा नेताहरुले जोड दिइरहेका छन् यहाँको के घारणा छ ?
म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकोले पार्टीलाई विधिसम्मत रुपले चलाउनु पर्छ भन्छु । पद्धतीको नाममा जे पनि गर्न कसैलाई छुट छैन । पद्धती, प्रकृया र प्रवृतीलाई एक ठाउँमा जोडेर ब्यावहारवादी दृष्टिकोणले अघि नबढे लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । नैतिकता आफनो मनभित्रबाट आउने कुरा हो । कसैले नैतिकता देखाएन भने केहि गर्न सकिदैन । नैतिकता देखाएन भनेर निर्वाचित सभापतिलाई गलहत्याएर निकाल्ने कसैलाई अधिकार छैन । नैतिकताको आधारमा पराजयको जिम्मा समेत नलिनेले नेतृत्व छाडछन भनेर के कुरा गर्नु बरु महाधिवेशन आउन २१,२२ महिना बाँकी छ र निर्धारित समय भन्दा अगाडी नै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिर्वतन गनुपर्छ । अहिल्येको चुनौतीलाई चीर्न सक्ने नेतृत्व ल्याउने तिर कांग्रेस क्रियाशिल हुनुपर्छ ।
पार्टीको १३ औ महाधिवेशनमा देउवा समुहबाट महामन्त्रीमा लड्नु भएको थियो यद्यपी तपाई पराजित हुनुभयो । त्यती बेलैदेखि काँग्रेसमा विभिन्न गुटहरु प्रभावकारी रुपमा सक्रिय छन् । तपाईको गुटको अवस्था के छ ?
पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनमा देउवा समुहबाट म महामन्त्रीको प्रत्यासि भएपनि अहिल्ये विचार र दृष्टिकोणको आधारमा अगाडी बढेको छु । गुट वा समुह भन्दा पनि विचार र विधिको आधारमा सवैलाई मिलाएर अगाडी बढनुपर्छ मेरो मान्यता यथावत छ । अव नयाँ मतदाता पनि थपिएका छन्, ति धेरै जसो युवाहरु छन् बढेका मतदाताहरुलाई पनि आकर्षित गरेर काँग्रेस अगाडी बढनुपर्छ । भातृ संस्थाहरुको प्रभावकारी भुमिका देखिएको छैन । उनीहरुलाई ससतm रुपमा परिचालित गर्नुपर्छ र पार्टीलाई सामुहिक नेतृत्वबाट चलाउनु पर्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पार्टी एकीकरणका अवसरमा काँग्रेस अव सहयोगीको भुमिकामा मात्र रहन्छ भन्नु भएको छ, तपाईको के टिप्पणी छ ?
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालको संविधान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन र लोकतन्त्रको अभिन्न अंङ्गको रुपमा रहेको प्रतिपक्षलाई स्विकार गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो । प्रतिपक्ष नै छैन, उसको अस्तित्व नै छैन भन्नु निरंकुस ढंगको कम्युनिष्ट त उहाँ होइन होला ? उहाँ निरंकुस एन्थुमा वा किम जोङ उन जस्तो पनि त होइन होला ? यो प्रधानमन्त्री ओलीको निम्न स्तरी टिप्पणी हो । बिगतमा भारतीय जनता पार्टीले चार सीट मात्र जितेको र यसका शिर्ष नेता अटल विहारी बाजपेयी पराजित भए पनि अहिले भारतमा विजेपीले शासन गरिरहेको छ । यो सवैले हेक्का राख्नु पर्छ, काँग्रेसले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राणा शासन विरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि संखनाद गर्यो, पंञ्चायत विरुद्ध लड्यो, राजा र राजतन्त्र विरुद्ध लड्यो, माओवादीले १२ वर्षे जनयुद्ध तारो बनाए पनि काँग्रेस पछि हटेन अहिले पनि काँग्रेस संविधान अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष हो । राज्य तथा लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षको सम्मान राख्न सक्नु पर्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीमा अहँकार बढेको छ यो असोभनीय कुरा हो । बेलायतको उदारण हेर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उहाँकी श्रीमती भन्दा पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले चिनेको हुन्छ भनिन्छ । प्रतिपक्षको दृष्टिकोणलाई संमायोजन गरेर जाने पद्धती नै लोकतन्त्र हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य चार पटक बढिसकेको छ, त्यस्तै अन्य समस्याहरु पनि जहाँको त्यही छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले संघीय संसदमा यसवारे प्रभावकारी रुपमा कुरा उठाउन सकेन भन्छन् नि ?
यो सरकार आएको समय अवधिमा १५ देखि ३५ प्रतिशत मुल्य बृद्धी भएको छ । हामी लोकतान्त्रिक प्रतिपक्ष हौं । कम्युनिष्ट प्रतिपक्ष होइनौं । सरकारको (हनिमुन डेज) अर्थात एक सय दिन कुरेर बसेका छौँ । सरकारले नीति र कार्यक्रम माफर्त महत्वकाक्षी योजना लजेष्टिक सपोर्ट विना नै सार्वजनीक गरेको छ । अहिले पनि सरकार केहि नयाँ कुरा बाहेक विगतमा काँग्रेसले लिएका नीतिको अनुसरण गरीरहेको छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस प्रतिक्षमा छ र कम्युनिष्ट सरकार अग्नि परिक्षामा छ । सरकारको एक सय दिन पुगेपछि पार्टीमा सल्लाह गरेर सरकारका गलत कृयाकलापका बिरुद्धमा गाउँ तथा नगरस्तर देखि नै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काँग्रेसले तयार रहेको छ । काँग्रेसलाई अण्डरइस्टिमेट नगरे हुन्छ वडास्तरसमम नै काँग्रेस बलियो छ ।
Tags: नेता नेपाली काँग्रेसप्रधानमन्त्री ओलीमा अहँकार बढेको छयो अशोभनीय कुरा हो - अर्जुनरसिंह के.सी
वडाध्यक्ष सापकोटाले अनुपलाई बनाए छोरा
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १७:४७